Apple Watch Inoenderera Kuwedzera, Iye Zvino Inowanikwa muMitambo Chek Stores muCanada | Ndinobva mac
Zviripachena kuti iyo Apple Watch ichaenderera mberi ichikohwa kubudirira uye humbowo hweichi ndechekuti Apple yakatendera kuti igove muzvitoro zvechitatu-bato. mune izvi ndizvo zvimwe zvitoro zvemitambo muCanada zvakadanwa Sport chek.
Izvi zvitoro zvemitambo zviri kwese kwese muCanada, saka kana iwe usina Apple Chitoro kana mvumo mutengesi padyo, iwe unogona kuve nemukana wekutenga iyo Apple Watch.
Zvitoro izvi zvine matatu mamodheru eApple Watch anowanikwa, iyo Series 1, iyo Series 2 uye iyo Nike +. Aya matatu mamodheru anowanikwa mune ese 38 uye 42 mm diagonals mumarudzi akasiyana-siyana ebhokisi. Sport Chek inopawo zvishandiso zveApple Watch, kusanganisira zvisere zvisere zvakatengwa pamadhora 69,99 imwe neimwe, adapter yemagetsi pa $ 24,99 uye iyo rinobva kuchaja waya pamutengo we $ 34,99, ese ari epamutemo Apple zvigadzirwa.
Kana iri yemutengo weApple Watch, vagari vemuCanada havafanirwe kutarisira kudzikiswa uye ndeyekuti mutengo weApple Watch mhando dzavanotengesa dzine mitengo yakafanana neApple. Zvino, pane runyerekupe rwekuti zvitoro zvezvipo zvezvitoro zvinogona kuregererwa kana uchitenga Apple Watch saka munguva pfupi iri kutevera Hongu, zvaizokwanisika kuwana Apple Watch nemutengo wakaderera pane wepamutemo.
Zvakare, isu tiri kupupura kuti idiki sei yemhuri yeApple inoramba ichienda munzira yayo mumusika mune vakwikwidzi vazhinji asi ingotaura nezvazvo, smartwatch ye smartwatch, iyo itsva yakanaka Apple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inoramba ichiwedzera, ikozvino yave kuwanikwa muSports Chek zvitoro muCanada